အခမဲ့ မဟုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အခမဲ့ မဟုတ်
ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေအတွက်စမ်းသပ်ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ မဟုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း တင်တဲ့ ပို့စ်များကို ငွေကြေးအားဖြင့် (စာမူခဆိုချင်ဆို) ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း…။
ရေနံသာ ကိုအောင် says:
အခုဆို ကျွန်တော်ရေးတာ ကိုယ်တိုင်ရေးသတင်းဆောင်ပါး ( ဘာဆက်လုပ်မလဲ NLD ? ) တစ်ပုဒ် နဲ့ ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာ တရုတ်ကမြန်မာကို ကာကွယ်ပြောဆိုသွား တဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ရယ် တင်ထားပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ဘယ်လိုများ ငွေကြေးအားဖြင့် ချီးမြှင့်မလဲ
စုထားငွေအနည်းဆုံး ကျပ်ငွေ ၁သိန်း(ပွိုင့် ၁သိန်း) ဖြစ်ရင် ရန်ကုန်မြို့ပေးပို့စေချင်တဲ့ လိပ်စာဆီ ယူအက်စ်ကနေ တိုက်ရိုက် တနည်းနည်းနဲ့ (တောင်းဆိုလာရင်)ပို ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ၂၄ နာရီ အတွင်း အင်အား အသင့်အတင့် ရှိသည့် မုန်တိုင်းငယ် ဝင်ရောက်မည် ၊အပူရှိန် ကြောင့် မန္တလေး တွင် တစ်ရက်တည်း အလောင်း ၂၇ဝ ခန် ့သဂြိုလ်ရ
၁၄းဝဝ နာရီ ့Updates မွန်ပြည်နယ် ၊ကရင်ပြည်နယ် ၊ကော့မှုး နှင့် ဧရာဝတီ တိုင်း ရှိ ဒေသ အချို ့တွင် မိုးစတင်ရွာသွန်း
၀၉း၁ဝ နာရီ Updates ဧရာဝတီ တိုင်း ပြင်စလူ ၊ငပုတော နှင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်း တွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်
[ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ် အနောက်မြောက်ဘက် အရပ် သို ့မေလ ၁၆ ရက်နေ <br /] ့မနက်က ဦးတည် ရွေ ့လျှားလာစဉ် "
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ် အနောက်မြောက်ဘက် အရပ် သို ့မေလ ၁၆ ရက်နေ ့မနက်က ဦးတည် ရွေ ့လျှားလာစဉ်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းသည် ယမန်နေ ့က အင်
အားနည်းသည့် မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ် အသွင်းပြောင်း လဲပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်း
မြောက် အရပ် ဆီသို ့ရှေးရှုလာသည်။
ထိုမုန်တိုင်းငယ် ၏ အရှိန်ကြောင့် ဧရာဝတီ တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသအချို ့၊ပဲခူးတိုင်း ဒေသအချို ့
နှင့် ရန်ကုန် တိုင်း တို ့တွင် မိုးရွာသွန်း နိုင်သည် ဟု Freedom Weather
Forecast မှ သတင်းထုတ်
ရန်ကုန် မြို ့၏ ယမန်နေ ့ညနေ က အပူချိန် သည် ၁၁၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ထိရှိခဲ့ပြီး အပူလွန်ကဲ မှု ကြောင်
သေဆုံးသူများ များပြားသောကြောင့် ရန်ကုန် မြို ့ရေဝေးသုဿာန် အဝင်လမ်းသည်
နာရေး ပို ့ဆောင်
သည့် ကားများ ဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသည် ဟု ၄၃ မော်တော် ကား လိုင်းမှာ
ယာဉ်မောင်း တစ်ဦးက Freedom
News Group သို ့ပြောသည်။
နိုင်ငံတဝှမ်း တွင် အပူဒဏ်ကြောင့် ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်မှု နှင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှု ကြောင့် ရုတ်တရက် သတိ
လစ်ပြီး သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ အယောက် ၁၀ဝ ခန် ့ထိရှိ
နိုင်သည် ဟု မန္တလေး ဆေးရုံ
ကြီး ပြင်ပ လူနာဌာန မှ ဆရာဝန် တစ်ဦး က ပြောသည်။
ဧပြီလ နှောင်း ပိုင်း က သေဆုံးသူများ မှာ လူကြီး နှင့် သက်ကြီးရွယ် အိုများ သာ ဖြစ်သော်လည်း မေလဆန်း
ပိုင်းမှ စကာ လူငယ်များ ပါသေဆုံးကြသည်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရ ကမူ အပူဒဏ်ကာကွယ်ရေး နှိုးဆော်ချက် သာ ထုတ်ပြန်ပြီး အပူဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသူ
ဦးရေကို သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိချေ။
မန္တလေး မြို ့တွင် ယမန်နေ ့က သုဿာန် နှစ်ခု တွင် အလောင်း ၂၇ဝ ခန် ့အား သဂြိုဟ်ခဲ့ရသည် ဟု မန္တလေး
စည်ပင်မှာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး ကပြောသည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့်မုန်တိုင်းငယ် သည် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် မိုင် ၂၅ဝ ခန် ့
အကွာမှ တဖြည်းဖြည်း ချင်းဖြတ်ကျော်သွား မည် ဖြစ်သည်။မုန်တိုင်းငယ် ၏ အရှိန်
ကြောင့် မြန်မာ ကမ်းရိုးတန်း
ဒေသများ တွင် လေပြင်းများ တိုက်ခတ် နိုင်ပြီး မိုးသည်းထန် စွာရွာသွန်း
ထို မုန်းတိုင်းငယ် သည် မုန်တိုင်း ကြီး အဖြစ်ပြောင်းလဲ နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ ကမ်းခြေ သို ့
ဝင်ရောက်သည့် အခါ အားပျော့ ပျက်ပြယ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် http://freedomnewsgroup.com/ မှသတင်း11:42 am
အဖြူ ရောင် စာ ရွက် မှာ
ရေး ချင် တာ ရေး ပြီး
ဖျက် လို့ ရ ပေ မဲ့
ငါရဲ့ အဖြူ ရောင် နှလုံး သား မှာ
မင်း ရေးခဲ့ တာ ကို ဖျက် ဖို့
အချိန်ဆို တဲ့ ခဲ့ ဖျက် လေး ကို သုံး ပေ မဲ့
မပျက် နိုင် တာ က ငါ ရဲ့ ကံ ပဲ
ငါ က ဆိုး ရွား တဲ့ ကံ ကို
ဓားရိုး ကမ်း ပေး ပြီး ငါ နှလုံး သား ကို
ဓားသွား ကမ်း မိ တယ်
ကိုယ့်ချစ်သူ ယောကျင်္ားလေးရဲ့သဘောထားတွေကို နားလည်ထားကြရအောင်။
မိန်းကလေးတွေ ရဲ ့စိတ်ခံစားမှုလေးတွေကို ရေးသားထားတာလေးတွေပါ …
ယောက်ျားလေး ချစ်သူတွေအတွက် နားလည်မှုရစေတာပေါ့
ယောက်ျားလေးတွေမှာရော ခံစားမှုလေးတွေ မရှိနိုင်ဘူးလား ?
ယောက်ျားလေးတွေ ရဲ ့ခံစားမှု ကို နားလည်စေလိုတဲ့သဘောနဲ့ ဒီ ပိုစ် လေး ကိုတင်လိုက်ရတာပါ။
1. မချစ်ပဲနဲ့ ချစ်တယ်လို့ မလိမ်ညာပါနဲ့ … မချစ်ရင် မချစ်ဘူးအစကထဲကပြတ်သားပေးပါ ။ (ဆန်းစစ်ဖို
2. ရည်းစားဟောင်း ရှိခဲ့ဖူးတာ ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်
အမှန်အတိုင်းချစ်သူယောက်ျားလေးကို ပြောပြပေးပါ။အချိန်ကြာပြီးမှ လိမ်ညာတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ သူမှာ
3. ချစ်သူယောက်ျားလေးရှေ ့မှာ အရင်ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းကို
4. မိန်းကလေးအများစု ပြောတတ်ကြပါတယ် …သူတို ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးအပ်လိုက်ရတာပါ
ယောက်ျားလေးတွေကရော …. နှလုံးသားတစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ပြီးမချစ်ခဲ့ရလို့လား ?
5. ယောက်ျားလေးတွေဟာ ချစ်သူ နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ နေ့ရက်တွေထက် အဲဒီနေ့ရက်တွေမှာ ဘာလုပ်ခဲ့တယ်
ဆိုတာကို သတိပိုရတတ်တယ် … မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကွာနေတဲ့အချက်ကတော့
နေ့စွဲတွေကို မှတ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး … နေ့ စွဲတွေက
အလွတ်ကျက်ထားလို့ရပေမယ့် အမှတ်တရလေးတွေကို အလွတ်ကျက်ထားဖို
6. ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြရင် သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အရောတဝင်မနေပါနဲ့ … အထူးသဖြင့်
7. ချစ်သူယောက်ျားလေးနဲ့ ချိန်းတွေ ့တဲ့အခါ မထင်မှတ်တဲ့ ကြင်နာမှုလေးတွေကို ပေးပါ
နှစ်များစွာတိုင်အောင် သူသတိရနေမှာပါ (ဥပမာ – ကိုယ်တိုင် ချက်ယူလာတဲ့ဟင်း နဲ့ ထမင်းချိုင့်လေးကို သူ
8. ယုံကြည်မှုပေးပါ – ယောက်ျားလေးတိုင်းဟာ အခွင့်အရေးသမားတွေမဟုတ်ပါဘူး …လွတ်လပ်စွာ
နေချင်ရုံသက်သက်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာလို့ မထင်မှတ်ပါနဲ့ ။
9. တခါတလေ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေရှိကြတယ် …
(ဥပမာ – တီရှပ် အင်္ကျီ အတူလေးတွေဝယ်ပြီး လျောက်လည်ချင်တာလို ဟာမျိုးပေါ့ … သဘောမတူရင်နေပါ
ကြောင်လွန်းပါတယ် လို့တော့ မတုံ ့ပြန်မိစေနဲ့ပေါ့)
10. ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်း မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်…
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို ့ရဲ့ပတ်သက်မှုက ကွာခြားလွန်းပါတယ်…မောင်၊နှမလို သဘောထားမျိုးပါ …။
11. ယောက်ျားလေးတွေက ချစ်သူ မိန်းကလေး ကိုလှစေချင်ကြတယ် …. လှလို
ကို့ချစ်သူ လှနေတာကို အမြဲ မြင်ချင်ကြတယ် ….။
12. တခါတရံ မဖြစ်စေချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ချုပ်ချယ်တယ်လို ့
ထင်တတ်ကြတယ် … အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ချစ်သူကို မဖြစ်သင့်တာတွေကို
13. ရှိတတ်ပါသေးတယ် … မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ ့မှာ ကို့
မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ရှက်တတ်ပေမယ့် … ကောင်လေးသူငယ်ချင်းတွေ ရှေ ့မှာကျတော့
ကို့ကိုချစ်သူ လို့ အသိပေးစေချင်ကြတယ် …
Action to action ပါ ပဲဗျာ … မိန်းကလေးကသာ သူ ့မိတ်ဆွေတွေ အလယ်မှာ
…ယောက်ျားလေးများက သူ ့အလိုလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ ့တိုင်းချစ်သူလို့
14. ဘဝမှာ ရင်ဆိုင်ဖို ့အားအင်တွေ နဲ့အခြေတည်ဖို ့လုပ်ငန်းတွေကို
တခါတရံ လစ်ဟာမှုလေးတွေ ရှိခဲ့ရင် နားလည်ပေးပါ …
နောင်တစ်ချိန်မှာပိုပြီး ဂရုစိုက်နိုင်ဖို့ပါ ။
15. ဂိမ်း ၊
ဘောလုံးပွဲ မက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်… စိတ်အတွက်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအနေနဲ့
ကစားနေတာပါ… တစ်သက်လုံး အဖော်ပြု ပေးနေမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး နဲ့
ဘောလုံးကွင်း တစ်ခုမဟုတ်တာ ယောက်ျားလေးတိုင်း သိထားကြပါတယ် ။
16. ချစ်သူနှစ်ယောက် ဘဝတစ်ခု ထူထောင်ဖို ့ဆိုတာ ယောက်ျားလေးရဲ ့တာဝန်ပါ … ဒါပေမယ့် သူ ့မိသားစု အခြေအနေကို ငဲ့ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ် …။
17. မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ထက်မြက်နေဖို့ မလိုပါဘူး
အလိုက်အထိုက်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရင်ရပြီ ၊ကူညီပေးနိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့
18. ဥပုသ်စောင့်တဲ့ ကျား မရှိဘူး တဲ့ … မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဦးနှောက် ၊ အသိပညာတွေ နဲ ့
ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေက အလကား ထားတာမဟုတ်ပါဘူး … လူ ့တန်ဖိုးရဲ
19. ယောက်ျားလေးတွေရဲ ့မကောင်းတဲ့အကျင့် တစ်ခုခု( ဆေးလိပ် ၊အရက် ၊ကွမ်း)စတာတွေကို
ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ် … ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ ့ပါးနပ်စွာပြောဆို နိုင်မှုနဲ
့ နားလည်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
20. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ မာန်မာန ပါပဲ
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ ့မာန်မာနကို အတတ်နိုင်ဆုံး မစော်ကားမိပါစေနဲ့ ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ
မိမိချစ်သူ မိန်းကလေးအတွက် မာန်မာနတွေကို လျော်ထားတတ်ကြတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မာန က မာနကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေထက်
အဆပေါင်းများစွာ ပိုပါတယ်…။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မိကြပြီဆိုရင်တော့
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုလေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုတာပေ့ါ…
လောကမှာ အဆိုးနဲ့ အကောင်း ဒွန်တွဲနေပါတယ်… လူဆိုးရှိသလို
မည်သူကိုမှထိခိုက်စေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ချစ်သူယောက်ျားလေးအပေါ်ကို မိန်းကလေးတွေနားလည်ပေးနိုင်ရင် ကျေနပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
မှတ် ချက် Website တစ် ခု မှ ကူး ယူ တင် ပြ လိုက် သည်
ကျွန် တော် ကြား ဖူး တဲ့ တ ဘောင် လေး ပါ လျှောက် တော့ မ တွေးေ စ ချင် ပါ ဘူး မနေ့ ည က အဖြစ် ပျက် လေး ပါ သောက် ကြာ ကြယ် ကြီး လ ကြီး နား နီးရင် ပြည် ကြီး ပျက် တတ် တယ် တဲ့ သောက် ကြာ ကြယ် ကြီး လ ကို ဖောက် သွား ရင် တိုင်း ပြည် ပျောက် တတ် တယ် တဲ့ သူ ငယ် ချင်း တို့ ယုံ ကြ လား နိုင် ငံ ရေး မ ပာုတ် ပါ နော်
ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့ သဘာဝအတိုင်း တနေ့လုံးနီးပါး စတတ် နောက် တတ်ကြပေမယ့် အိပ်ခါနီးလေးမှာတော့ သူတို့ ဂရုစိုက်တဲ့ (သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ )မိန်းကလေးကိုအကြောင်းကိုတော့ တွေးကြစမြဲပါဘဲ ……
ယောက်ျားလေးတွေက ကောင်မလေးတွေထင်ထားတာထက် ပိုပြီးစိတ်ခံစံားလွယ်ပါတယ်.. သူတို့ခေါင်းထဲက ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးကို ထုတ်ပြစ်ဖို့ဆိုတာ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးအချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ်… Second တိုင်းအမျှ ခံစားရတတ် ပါတယ်…
သူတို့ဟာ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြုံးမှာ ရူးသွပ်သွားတတ်ပါတယ်..
ချစ်ရသော မိန်းကလေးအတွက် သူတို့သာလျှင် စကားပြောဖော် ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်..
သူတို့မှာရှိနေတဲ့ ပြသနာကိုပြောပြနေခြင်းဟာ နားထောင်ပေးစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ.. အကြံတောင်းနေတာ မဟုတ်ကြဘူး.. တိတ်တိတ်လေးနဲ့နားထောင်ပေးနေလိုက်ပါ..
ပုံမှန်ပြောဆို စနောက်နေချင်းဟာလည်း ကောင်လေးဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းသက်သေ တစ်ခုပါပဲ..
ကောင်လေးချစ်တတ်တာ ကောင်မလေးထက် ပိုပါတယ်..
သူတို့ ကောင်မလေးတွေကို မိုက်တယ်. ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်ကြပါတယ်.. အဲ.. လှတယ် မဟာဆန်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ တကယ်ချစ်လို့ တကယ်ရင်ထဲက ခံစားနေရ လို့တဲ့..
ကောင်မလေးရှေ့မှာ မကောင်းတာတစ်ခု (something stupid) လုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ နောက်ရက်တော်တော်ကြာကြာတဲ့ ထိ တွေးနေတတ်ပါတယ်.. မဟုတ်ရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့တဲ့ချိန်ထိ တွေးနေတတ်ပါတယ်..
သူတို့ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုတွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..
သူတို့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြောင့်ရူးနေရပြီဆိုရင် သူတို့အမှန်တကယ်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်.. ပြောခဲတဲ့စကားလေးပါ..
တစ်ယောက်တည်းနေခွင့်ပေးပါ ဆိုတာ ညာတာပါ.. ဆိုလိုရင်းကတော့ ငါပြောတာကိုလာပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..
သူတို့စကားကိုသေသေချာချာ ကျကျနန ပြောနေရင် ဂရုစိုက်ပေးပါ နားထောင်ပေးပါ..
တစ်second ထက် ပိုပြီးကောင်မလေးအား ကြည့်နေခဲ့ရင် သူတစ်ခုခုကိုသေချာ တွေးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်..
ခန့်မှန်းရခက်တဲ့မိန်းကလေးတွေ ထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးတွေ ရူးတူးတူးပေါချာချာ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်းကိုပိုတွေးတတ်ကြပြီး သူတို့အာရုံမှာ ထိုမိန်းကလေးများက မသိဘာသာ ပိုနေရာယူနေတတ်ကြပါတယ်..
သူတို့တစ်ယောက်ထဲ ပြသနာအားလုံးကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါဝူး.. သူတို့ဝန်ခံဖို့မရဲတာသာဖြစ်ပါတယ်..
ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့အတွက် သူရဲ့အိပ်စက်ခြင်း နဲ့ သူရဲ့ကျမ်းမာရေးကို ပြောပြနေခြင်းဟာ သူကောင်မလေးကို တကယ်ကြိုက်လို့ အတူရှိနေချင်တဲ့အတွက်သာပြောနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကောင်မလေးလမ်းခွဲသွားတာ လတော်တော်ကြာနေပေမယ့် ဆုတောင်းတစ်ခုရရှိမယ်ဆိုရင် အဲတာဟာကောင်မလေးသူဘဝအတွင်း ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..မှတ်ချက် Copy
အပေါ်က moesatrain ကွန်မင့်တွေ ထဲ က ဒီဟာလေး တွေ ကို သဘောတူ တယ် ။ ကြိုက်တယ်
မှန်ပါတယ် ။ ရံဖန်ရံခါ မှာ ယောက်ျားတွေ ဟာ ၊ အလုပ်ကနေ အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ အချိန် ၊ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ အချိန် မျိုးတွေ မှာ ဆို ကိုယ့်မိန်းမ ၊ ကိုယ့်ချစ်သူ နဲ ့တိုင်ပင်တာထက် ၊ ထွက်ပေါက် အလို ့ငှါ ဂိမ်းတို ့၊ ဘောလုံးပွဲ တို ့၊ ဘိလိယက် စနူကာ ခုံ သွားပြီး ကစားတာတို ့အစရှိသဖြင့် ၊ သက်သာအောင် နေတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီဟာ က ဘဝ မဟုတ်မှန်းတော့ ယောက်ျားတိုင်း ကိုယ်စီ သိရှိပြီးသားပါ ပဲ ။
ပွိုင့် ၁သိန်းး အို ဟို ဟိုး